Fil d'actualités du 16/12/2017
16/12/2017 - 11:30 : LITERATIORA: Hanolotra tsangan-tononkalo antsoina hoe "ILAY FITIA NAJORONTSIKA" ny Vondron'ny Korira Kanton'ny Haisoratra Malagasy sy ny Aceem Radio rahampitso 17 desambra eny amin'ny IKM Antsahavola.
16/12/2017 - 11:00 : TOLIARA: Mitokana ny TNT (Télévision Numérique Terrestre) any an-toerana ny Filoham-pirenena amin'izao fotoana izao.
16/12/2017 - 10:30 : TEATRA: Tontosaina anio ao amin’ny Alliance Française Andavamamba ny teatra "Ilay fitia tsy mipaka" sy "patrak'ala" ka amin'ny 3 ora sy amin'ny 5 ora tokalandro izany, samy sangan'asa nosoratan’i JJ RABEARIVELO.
16/12/2017 - 10:00 : FIFANINANA MISS SY MINI MISS: Hotanterahina anio 16 desambra eny amin'ny Hotely A&C Ivato ny famaranana ilay fifaninana "miss" sy "mini miss princesse".
16/12/2017 - 09:30 : KUNG FU WISA: Tokanana anio eny Ambatomirahavavy Antanety Kingory ny "Temple de Pierre Mizael"
16/12/2017 - 09:00 : MISS MADAGASCAR 2018: Randriambelonoro Miantsa Valisoa, Miss Mlamanga no lany ho Miss Madagascar 2018. Zafititi Nouaïka, Miss Diana sy Malleka Esmelralda izay Miss Sava kosa indray no lany 1ère sy 2ème Dauphines.
15/12/2017 - 20:05 : LOZAM-PIFAMOIVOIZANA MAHATSIRAVINA: Mpitondra moto iray nifandona tamin'ny taksibe eny Iavoloha amin'izao ora izao, ka naratra mafy sy atahorana ny ainy, ary efa nalefa eny amin'ny hopitaly.
15/12/2017 - 16:00 : MISS MADAGASCAR: Hotanterahina anio manomboka amin'ny 8 ora alina eny amin'ny Hotely Carlton ny famaranana amin'ny fifidianana ny Miss Madagascar.
15/12/2017 - 15:30 : FIFIDIANANA 2018: Azo tanterahina ao anatin’ny taona 1 ny fitsapakevim-bahoaka sy ny fifidianana filoham-pirenena ary ny solombavam-bahoaka hoy ny solombavam-bahoaka Nome Razaranaina.
15/12/2017 - 15:00 : RALLYE SHELL HELIX: Ndrianja sy Fanja nitondra ny fiara Subaru Impreza N4 no nahatontosa fe potoana haingana indrindra 9minitra sy 21.3sekondra teo amin'ny dingana voalohany ny tolakandro teo Ambohitsiry sy Ankadindravololona.
Archive du 20161219
Minisitra HVM manao propagandy Ny asa tsy misy mandeha ?
Velezo ny vy dieny mafana ! Tontosa ny Comesa, tanteraka ny Frank�f�nia, nampanantena hanome 10,4 miliara dolara an�i Madagasikara ny mpamatsy vola.
Famahana ny delestazy Mila miala izay tsy mahavita azy
Tsaroan�ny Malagasy tsara ny tenin�i Hery Rajaonarimampianina hoe �Telo volana ihany dia mivaha ny olan�ny delestazy� fony izy kandida filoham-pirenena, saingy 3 taona aty aoriana vao mainka nahery vaika.
PM Mahalafy Olivier Tsy misy mihaino
Hentitra ny tenin�ny praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier ny zoma lasa teo fa tsy azo ekena intsony ity delestazy ity ka nanome baiko hentitra izy fa tapitra manomboka androany (zoma) ny delestazy eto Antananarivo.
Rajoelina sy ny MAPAR Voa tamin'ny kely foana
Nirehareha fatratra ny fanjakana tetezamita fa nahavita niasa na tsy nisy famatsiam-bola avy any ivelany aza. Satria betsaka ny tahirim-bola vahiny tamin�ny andron�i Marc Ravalomanana izay efa nahatratra hatrany amin�ny 2 miliara dolara, ka namatam-bonona ny mpanongam-panjakana.
Hery Rajaonarimampianina Misy manajabaka
Ao anatin�ny vanim-potoanan�ny fety tanteraka isika amin�izao fotoana izao, saingy mitady hafampana ny rivotra politika.
Tranom-pody no vitan�ny vava e !
Miarahaba ry Jean a ! Faly tokoa ny tena naheno ilay fanambarana miezinezina hoe ho tapitra hatreo ny delestazy, ka dia tehaka mirefodrefotra no setriny tamin�iny fotoana iny.
Fanadiovana faobe eny amin�ny fokontany Lasa bizin�ireo tompon�andraikitra
Raikitra ny fikomian�ireo mponina sasany teny amin�ny fokontanin�Ambohitrakely ny sabotsy teo nandritry ny fanadiovana faobe nasaina nataon�ireo mponina teny an-toerana.
�Piratage informatique� nataon�i Rosia Hamaly faty i Etazonia ?
Nampangain�ny filoha Amerikanina Barack Obama ho tao ambadiky ny fanakorontanana ny voka-pifidianana farany teo tany Etazonia ny filoha Rosianina Vladimir Poutine. Efa noresahako an�i Vladimir Poutine io
Zotra 152 Nivaky ho roa
Nivaky ho roa ny zotra 152 Miarana mampitohy an�Amboditsiry sy Tanjombato. Efa ho tapa-bolana izao no nitrangan�izany vokatry ny tsy fifankahazoana nisy teo amin�ny mpitantana ny kaoperativa sy ireo tompona fiara.
Fanampiana ho an�ny mpitatitra Betsaka ireo tsy mbola nahazo
Mitaraina noho ny fitarazoan�ny fanampiana omen�ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety amin�ny alalan�ny minisitera miadidy azy ny ankamaroan�ireo kaoperativa eto an-drenivohitra.
Asa sosialy Tafajoro ny �ho maitso ny tontolo�
Mijoro ao Antsirabe ankehitriny ny fikambanana �Ho Maitso ny Tontolo�, fikambanana mpanao asa soa sy hiaro ny tontolo iainana.
Aretina �Alzheimer� 120 no voany tato anatin�ny enim-bolana
120 isa ireo zokiolona voan�ny aretina Alzheimer tato anatin�ny enim-bolana teto an-drenivohitra. Nentin�ny fianakaviany nanatona ny �Association Madagascar Alzheimer Masoandro Mody�
Ravalomanana sy ny FJKM Matotra ny fiaraha-miasa
Na dia tsy be resaka firy aza ny Fjkm dia fantatra fa mandeha tsara ny asa fanorenana eny amin�ny kolejy Teolojika Ivato izay tsangambaton�ny faha-50 taonan�ny Fiangonan�i Jesoa Kristy eto Madagasikara.
Mila mijery fitaratra
Mimenomenona ireo mpanao politika efa ela nietezantsika rehefa ataon�ny naman�izy ireo hoe dinozaoro kanefa ny fihetsika sy ny resaka atao dia mbola mirona any amin�ny fiezahana ny famerenana ireo fitantanana efa tsy nahomby tamin�ny fotoan�andron�izy ireo hatrany